အရမ်းချစ်ရတဲ့အစ်ကိုဖြစ်သူ ပြေတီဦးနဲ့ သူမရဲ့ ငယ်ဘဝအမှတ်တရတွေ ကို လွမ်းဆွတ်သတိရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ညီမဖြစ်သူ ငွေတီဦး – Cele Oscar
ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ ပွတေီဦး ကတော့ လကျရှိ အငျးစိနျထောငျ ထဲမှာ ရောကျရှိနတော ဖွဈပါတယျနျော။ွေ ပတီဦးရဲ့ မိဘမြားဟာ အသကျအရှယျ ကွီးမွငျ့နပွေီ​ ဖွဈတာကွောငျ့ သားအတှကျ စိတျပူနကွေတာလညျး ဖွဈပါတယျနျော။မနကေ့ အူဝဲလှတျ လာပွီဆိုပွီး သတငျးတှေ ထှကျခဲ့ပမေယျ့ကောလဟာလတှသော ဖွဈတယျ လို့လညျး မိသားစုဝငျမြားမှ ပွနျဖွရှေငျးထား တာပါနျော။ပွတေီဦးတှငျ အကွီးဆုံး အဈမ ဆှီတီဦးနဲ့ အငယျဆုံး ညီမလေး ငှတေီဦးဆိုပွီး ရှိပါသေးတယျနျော။ငှတေီဦးကတော့ ပွတေီဦးရဲ့ ကလေး ဘဝက အမှတျတရတဈခုကို ပွောပွလာပါပွီနျော။သူတို့ငယျငယျတုနျးက မောငျနှမနှဈယောကျ အရမျးခဈြခဲ့ကွတာကိုလညျး ဖတျရှုပေးကွပါဦးနျော။
” ငယျငယျတုနျးက သူဆုယူရငျ ဘေးက လိုကျပီး သူရတဲ့ ဆုတှေ လိုကျသယျရတယျ..ကွီးတော့ သူ့ကိုပေးတဲ့ ပနျးတှလေိုကျသယျရပွနျရော..မမေေ တဈလတဈခါ ရနျကုနျသှားရငျ မမေကေို့လှမျးရငျး မောငျနှမနှဈယောကျ တညျး ကနျြခဲ့တဲ့အခြိနျတှကေို သတိရမိတယျ..အဲ့တုနျးက ကိုယျက သူငယျတနျးတောငျ မရောကျသေးတဲ့ လကျဖကျမစား ကှမျးမစား အပြျောတကျတုနျး..ဆရာကွီးရယျကို ကွီးမကျြနှာလေး ကွညျ့ပါရစဆေိုပွီး သူ့အတနျးကို သှားခြောငျး ခဲ့ရဘူးတယျ..သူကလညျး မမေကေို့ လှမျးလို့ မကျြရညျတှတှေကေတြော့.
.ဆရာမက ဘာဖွဈလို့လဲ မေးတာပေါ့..မမေကေို့ လှမျးလို့ ဆိုတော့မမေသှေားတာ ညီမလေးရောပါလားဆိုပွီး ဆရာမက သူ့ကို မေးတယျ..ဟငျ့အငျး ညီမလေးလညျး မပါဘူး ဆိုတော့..ညီမလေးကိုတောငျ ထားခဲ့တာ မငျးက ငိုနစေရာ လားဆိုပီး ဇာတျပိုးကို ရိုကျလိုကျတာ နှဖူးနဲ့ ခုံစောငျးနဲ့ ရိုကျမိလို့ဒဏျရာရပါရော..ဒဏျရာနဲ့ပွနျလာတဲ့သားကိုမွငျပွီး ဖဖေကေ ဒေါသ ထှကျရောပေါ့..ဒီလောကျတောငျလုပျရလား ဆိုပီးဆရာမကို စိတျတိုတာပါ..ဘာရယျမဟုတျဘူး..မနျမိုရီပွနျတကျလာတော့ငယျငယျတုနျးက အကွောငျးတှခေေါငျးထဲ ပွနျရောကျလာလို့..” လို့ငှတေီဦးမှ ရေးထားပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ….
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦး ကတော့ လက်ရှိ အင်းစိန်ထောင် ထဲမှာ ရောက်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ြေ ပတီဦးရဲ့ မိဘများဟာ အသက်အရွယ် ကြီးမြင့်နေပြီ​ ဖြစ်တာကြောင့် သားအတွက် စိတ်ပူနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။မနေ့က အူဝဲလွတ် လာပြီဆိုပြီး သတင်းတွေ ထွက်ခဲ့ပေမယ့်ကောလဟာလတွေသာ ဖြစ်တယ် လို့လည်း မိသားစုဝင်များမှ ပြန်ဖြေရှင်းထား တာပါနော်။ပြေတီဦးတွင် အကြီးဆုံး အစ်မ ဆွီတီဦးနဲ့ အငယ်ဆုံး ညီမလေး ငွေတီဦးဆိုပြီး ရှိပါသေးတယ်နော်။ငွေတီဦးကတော့ ပြေတီဦးရဲ့ ကလေး ဘဝက အမှတ်တရတစ်ခုကို ပြောပြလာပါပြီနော်။သူတို့ငယ်ငယ်တုန်းက မောင်နှမနှစ်ယောက် အရမ်းချစ်ခဲ့ကြတာကိုလည်း ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော်။
” ငယ်ငယ်တုန်းက သူဆုယူရင် ဘေးက လိုက်ပီး သူရတဲ့ ဆုတွေ လိုက်သယ်ရတယ်..ကြီးတော့ သူ့ကိုပေးတဲ့ ပန်းတွေလိုက်သယ်ရပြန်ရော..မေမေ တစ်လတစ်ခါ ရန်ကုန်သွားရင် မေမေ့ကိုလွမ်းရင်း မောင်နှမနှစ်ယောက် တည်း ကျန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကို သတိရမိတယ်..အဲ့တုန်းက ကိုယ်က သူငယ်တန်းတောင် မရောက်သေးတဲ့ လက်ဖက်မစား ကွမ်းမစား အပျော်တက်တုန်း..ဆရာကြီးရယ်ကို ကြီးမျက်နှာလေး ကြည့်ပါရစေဆိုပြီး သူ့အတန်းကို သွားချောင်း ခဲ့ရဘူးတယ်..သူကလည်း မေမေ့ကို လွမ်းလို့ မျက်ရည်တွေတွေကျတော့.
.ဆရာမက ဘာဖြစ်လို့လဲ မေးတာပေါ့..မေမေ့ကို လွမ်းလို့ ဆိုတော့မေမေသွားတာ ညီမလေးရောပါလားဆိုပြီး ဆရာမက သူ့ကို မေးတယ်..ဟင့်အင်း ညီမလေးလည်း မပါဘူး ဆိုတော့..ညီမလေးကိုတောင် ထားခဲ့တာ မင်းက ငိုနေစရာ လားဆိုပီး ဇာတ်ပိုးကို ရိုက်လိုက်တာ နှဖူးနဲ့ ခုံစောင်းနဲ့ ရိုက်မိလို့ဒဏ်ရာရပါရော..ဒဏ်ရာနဲ့ပြန်လာတဲ့သားကိုမြင်ပြီး ဖေဖေက ဒေါသ ထွက်ရောပေါ့..ဒီလောက်တောင်လုပ်ရလား ဆိုပီးဆရာမကို စိတ်တိုတာပါ..ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး..မန်မိုရီပြန်တက်လာတော့ငယ်ငယ်တုန်းက အကြောင်းတွေခေါင်းထဲ ပြန်ရောက်လာလို့..” လို့ငွေတီဦးမှ ရေးထားပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….
မိခင်အိမ်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတဲ့ အေသင်ချိုဆွေ